Scotland ရဲ့ နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်တွေထဲကမြန်မာကျောင်းသားများ ကြား ရေပန်းစားတဲ့ University of Glasgow (ရန်ကုန် - မတ်လ ၂၅) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■့ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာကိုသွားရောက်ပညာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ အရေအတွက်ဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုများလာသလိုScotland ရှိ တက္ကသိုလ်တော်တော်များများမှာလဲမြန်မာကျောင်းသားတွေဟာတက်ရောက်နေကြပါတယ်။.Glasgow မြို့ဟာScotland ရဲ့နာမည်ကြီးမြို့ကြီးဖြစ်ပြီးမြို့တော်Edinburghနဲ့အလှမ်းမဝေးလှတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ် Scotland... Read more... ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ BHMS ကျောင်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဖြင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်ကိုပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရယူ ပြီးသင်ယူလိုပါသလား (မန္တလေး - မတ်လ ၁၈) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် ဥရောပရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံBusiness & Hotel ManagementSchool (BHMS) ကျောင်းမှာ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဖြင့်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီများကိုသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွ... Read more... “ဘွဲ့ တစ်ခုခုရထားပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိသူများအတွက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်အကိုင်/ပညာရေးလမ်းအကြောင်းများ” (ရန်ကုန်- မတ်လ ၁၆) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုဘွဲ့ရထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ( အဝေးသင်ဖြစ်ဖြစ်/UFLကပဲဖြစ်ဖြစ်/ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖြစ်/ကွန်ပျူတာဘွဲ့/ ဆရာဝန်ဘွဲ့/ သမိုင်းဘွဲ့ / ပထဝီဘွဲ့ / Physic/ Chemistry)တွေ…. ခုလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ …..ဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ?.❑ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူများ အနေဖြင့် စာတေ... Read more... “HND, NCC, abe ပြီးရင် ဘယ်တက္ကသိုလ်တွေမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြမလဲ” (ရန်ကုန်- မတ်လ ၁၁) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာနိုင်ငံမှ HND, NCC, Abe လက်မှတ်ရမြန်မာကျောင်းသားများအတွက်အင်္ဂလန်ဘွဲ့ဒီဂရီများကိုအချိန်တိုအတွင်းတိုက်ရိုက်တက်ရောက်သင်ယူုနိုင်ဖို့ပညာရေးလမ်းကြောင်းများကို Kaplan Higher Education AcademySingapore မှဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွင် -❑ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာအတွက် Business အပြင်အခြားရွေးချယ်နိုင်သည့် အထူးပြု... Read more... “အင်ဂျင်နီယာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်များ ၏အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . ဆွေးနွေးပွဲမှာ-❑ အခုခေတ်နည်းပညာပိုင်းတွေမှာအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီတိုးတက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလိုအပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်တွေကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိ ပေါင်းစပ်အသုံးချမလဲ❑စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းသင်ယူအသုံးချတတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အတွက် အနာဂတ်မှာဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရနိုင်မလဲ❑... Read more... “မြန်မာနုိုင်ငံမှ ဆရာဝန်များနှင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာဘွဲ့ ရရှိသူများ အတွက် (၁)နှစ်သင်ယူရမည့် အင်္ဂလန်ဆေးပညာဆိုင်ရာဘွဲ့လွန် သင်တန်းများ CROWN Education တွင်လျောက်ထားနိုင်” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာနိုင်ငံမှဆရာဝန်ဘွဲ့ရများသို့မဟုတ်ဆေးပညာဆိုင်ရာဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသော သူများအတွက် အင်္ဂလန်တွင် တစ်နှစ်ပညာသင်ယူရမည့် အောက်ပါ ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာဘွဲ့များကိုCROWN Education ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးရုံးများတွင် လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။.လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့်ဘွဲလွန်သင်တန်းများမှာ….■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■.‪#‎... Read more... CROWN Consulting Limited CROWN Education သည် CROWN Consulting Limited အောက်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါCROWN Consulting Limited အနေဖြင့် အင်္ဂလန်၊ သြစတြေလျ၊ အမေရိကန်မှ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့် ပူးပေါင်းလျက်မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကပညာရေးကဏ္ဍအတွက် အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသွ... Read more... Pages1